🥇 ▷ The 'Sims 4' wuxuu ku soo dhaweynayaa adduunka sixirka iyadoo ballaarintiisa cusub ✅
The ‘Sims 4’ wuxuu ku soo dhaweynayaa adduunka sixirka iyadoo ballaarintiisa cusub
The Sims 4 iyo Kingdom of Magic
The Sims 4 waxay wataan uruurin fiican oo gadaashooda ah, todobo inay ahaadaan kuwo sax ah, tiradaas oo hada ku dareysa imaatinka qeyb cusub oo ay ka buuxaan sixir, sixir fara badan. Boqortooyada sixir, waa maxay magacani cusbooneysiin cusub, ayaa lagu dhawaaqay bishii Juun laakiin ma ahayn illaa maalmo ka hor markii aan awoodnay inaan aragno sawirradii ugu horreeyay (mahadsanid muuqaal horudhac ah iyo mid kooban oo la daabacay 19-kii bishaan iyo duulimaad rasmi ah oo la sii daayay maalinta ku xigta).
Ballaarinta, sida aan nidhaahno, waxaa dhiirrigaliyay dunida sixir iyo sixir, si ay sims-kaaga u baran karaan dhammaan waxyaabaha sirta ah ee adduunka isla markaana ay la xiriiraan kuwa kale oo iyaga la mid ah oo iyaguna ku tababbarta oo abuuraya lafdhabarta. Waxay sidoo kale yeelan doonaan awood ay ku ururiyaan waxyaabo ay ku samaynayaan hadalo xiisa leh oo ay ku tijaabiyaan xabaal weyn oo xitaa ay tijaabiyaan xirfadahooda ka dhanka ah sixirroolayaasha kale ee doonaya.
Waa wax aan jirin iyada oo la sheegayo in qofku aanu geli karin caynkan caalamiga ah ee sixirka iyo higgaadda isaga oo aan wadan xamuulka labiska ku filan, sidaa daraadeed ballaarintan ayaa sidoo kale keenaysa ururinta wanaagsan ee dharka qaaska ah munaasabadda, oo leh lakabyo, dharka jannada, aaladaha iyo noocyo badan oo dhar xad dhaaf ah oo aad u tagi karto si aad ugu dhigato sixirro kale ama aad iskaa u istaagto, tilmaamayso EA dadka.
Baadh adduunyada ka sarraysa oo aad ku caanbaxdo farshaxanka sixirka ‘The Sims 4 iyo The Kingdom of Magic!
Waxaa loo heli karaa Sebtember 10, 2019 ee PC iyo Mac. Pic.twitter.com/3dyfAzQLbU
– The Sims (@LosSimsES) Ogosto 20, 2019
Wax kasta sidoo kale waxaa lagu keydin doonaa deris cusub oo la yiraahdo Glimerbrook, taas oo aad ka heli karto xariiriye kuu siinaya marinka Boqortooyada Magic oo taas oo dareenka qoyska, jiidooyinka, cadaalada iyo jilayaasha kaleba ay u guuraan taas oo ka sii kala duwan – sida laga yaabo inaad hore u soo aragtay sawirada aad hadda ka kor marayso Khadkan. In Simspedia, websaydh u heellan fandom The Sims oo malaayiin ah faahfaahinta ciyaarta fiidiyowga, waxaad ka heli kartaa xog ku filan ballaadhintan (jilayaasha cusub ee u muuqda, xumaha la sameyn karo ama xirfadaha cusub ee jira) iyo xitaa xiisaha la xiriira ballaarinta – si dhab ah, waxay kuu sheegaan t-o-d-o.
Jiritaanka Boqortooyada sixir
Boqortooyada Magic for The Sims 4 ayaa laga heli doonaa Sebtember, 10aad (haa, iyo kaliya seddex toddobaad oo si xun loo tiriyey) labada PC iyo Mac halka aan sugi karno illaa Oktoobar 15 si aan ugu raaxeysano qalabka loo yaqaan ‘Xbox One iyo PlayStation 4’. Xusuusnow inaad ku ciyaarto PC iyo Mac waxaad u baahan tahay The Sims 4 (ciyaarta si gooni gooni ah ayaa loo iibiyaa) iyadoo la cusbooneysiinayo.
Kuwani waa weeraradan cusub ee laga heli doono Pokémon Sword & amp; Gaashaanka
Berrito indies cusub ayaa lagu shaacin doonaa Xbox Game Pass
Microsoft waxay dib u eegis ku sameyneysaa naqshadaha xakameynta Xbox One
Console Nintendo Switch wuxuu lahaan doonaa daabacaad gaar ah oo Disney
Ciyaar cusub oo door-ciyaara ayaa imaan doonta Android: Warhammer Odyssey
Daemon X Machina wuxuu maanta ka furayaa Nintendo Switch
Dhejintii ugu dambeysay
XPG Spectrix D60G DDR4-3600 Faallooyinka: Fantastic Caag
Xiaomi Mi Router Wifi 6 router AIoT AX3600 hadda waa kuu diyaar…
Xiaomi Mi. Ogeysiis rasmi ah 10: Kani waa nooca caalamiga ah ee My CC9 Pro…
Xiaomi Mi 9T Pro ayaa dhakhso loo heli doonaa Amazon: halkan waa taariikhda
Xiaomi Mi. 9 Pro 5G: Snapdragon 855 Plus iyo casriga 40-ku saleysan…
Wararka Mobiles iyo Falanqeynta, Talooyinka Ciyaaraha, Qalabka!